နေ၀န်းနီရှေ့ရောက်လာသော ခေတ်အလွဲများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » နေ၀န်းနီရှေ့ရောက်လာသော ခေတ်အလွဲများ
Posted by naywoon ni on Oct 26, 2011 in Ideas & Plans, My Dear Diary | 18 comments
အတွေးထဲ ရောက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ရွာထဲမှာ လာလာတွေ့နေရတော့ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့တော့ ဇာတ်ရည်လည်လာပါပြီ….။ ကိုယ်တိုင် ဘယ်ကပြန်ပြီး စပြောရမှန်းမသိတာ သူတို့လေးတွေက အစဖော်ဖော် ပေးနေသလိုဖြစ်လာလို့ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်…။ ဟုတ်ပါတယ်…။ ခေတ်အလွဲ ပါ…။
အဲဒါနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးပြောရရင် မျိုးဆက် အကြောင်းပါ ပြောရလိမ့်မယ်…။ ကနေ့ လူကြီးနဲ့ လူငယ် မျိုးဆက်ကွာဟမှုဟာ အပိုင်းအခြားကျဉ်းမြောင်းသွားတာပါ…။ ယခင်ကတော့ မျိုးဆက်တစ်ဆက်နဲ့ တစ်ဆက် နှစ်သုံးဆယ်လောက် ကွာမှ အတွေးအခေါ် အယူအဆ ကွာဟ ပေမဲ့ ကနေ့ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက် အသက်ကွာရင်ကို မျိုးဆက်တစ်ဆက် ကွာဟသွားပါပြီ…။ ဆိုလိုတာက နေ၀န်းနီ တို့ အသက် 40-45 ကြားရှိတဲ့သူတွေနဲ့ အသက် 25-30 ကြားရှိတဲ့လူငယ်တွေ ဟာ မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကွာဟသွားပါပြီ…။ အတွေးအခေါ်ချင်း ခံယူချက်ချင်း ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ချင်း လုံးဝ ကွာခြားနေပါပြီ…။
သမိုင်းပေးတာဝန်အရ…… မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေ နောက်တစ်ဆက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးရမဲ့ လူနေမှု စနစ် အတွေးအခေါ် အယူအဆ တွေ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်…။ ဒီစနစ်ဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်း စဉ်လာမှာ သိပ်ထင်ထင်ရှားရှား မတွေ့ရပါဘူး…။ ဒီလိုပဲ ဖာသိဖာသာ နေလိုက်ကြတာပဲ…။ နောက်မျိုးဆက်ကလည်း ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ အချိန်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ပြီး သူနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး အရင်ကိုယ့်ရှေ့က မျိုးဆက်ကို သိပ်အရောတစ်ဝင်လုပ်မနေပါဘူး…။ အားမကိုးဘူးပေါ့လေ….။ သူတို့ ဒီအချိန် တို့အရွယ်မှာ ဖြစ်ခဲ့ ခေတ်က တို့လက်ရှိဖြစ်နေတာနဲ့ တစ်ခြားစီ ဒိတ်အောက်နေပြီဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ လက်လှမ်းမီသလောက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင်ပဲ ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါပဲ…။ နေ၀န်းနီတို့ အသက် 20 ကျော်လောက်ကလည်း ဒီလိုပဲ…။ ဒါပေမဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ်လောက် အတွင်းမှာ အဆမတန် ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ကြုံလိုက်ရတော့…….။
အစက ပြန်ပြောပါရစေ…။ နေ၀န်းနီ အသက် 18 လောက်မှာ ဒုတိယနှစ် အရေးအခင်းနဲ့ ကျောင်းတွေပိတ်…။ ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ရောက်ကုန်တော့တာပဲ…။ များသောအားဖြင့်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူ လက်သင့်ခံသေးတဲ့ ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေ ဖြစ်ကုန်တာများပါတယ်…။ တစ်ခြားဌာနဆိုင်ရာတွေထဲမှာလညူ် ကျောင်းတစ်ပိုင်းတစ်တွေ အများကြီးရောက်သွားတာပါပဲ…။ ဒါအခြေအနေ အချိန်အခါအရ ဖြစ်သွားကြတာပါ…။ အဲဒိအချိန် တံခါးဖွင့် စီးပွားရေး ကစခါစ….။ စနစ်တစ်ခုက ပြိုကျသွားပြီး နောက်တစ်ခု တည်ဆောက် ဖို့ အားယူနေတဲ့ အချိန်…။ ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ကျောင်းသားတွေ အလုပ်ခွင်ထဲ အုံလိုက်ကျင်းလိုက် တိုးဝင်နေတဲ့ အအြေနေ …။ စဉ်းစားသာကြည့်လိုက်ပေရော့…။
အဲဒိအချိန် အခြေအနေက ဒီကနေ့ လောက်မဆိုးတာတော့ အမှန်ပဲ…။ မဆိုးဘူးဆိုတာက အလုပ်အကိုင် နေရာ တွေက သူနဲ့ တန်ရာတန်ရာ ဆိုသလို ရသွားကုန်တာပဲ…။ မိရိုးဖလာ အလုပ် လုပ်သူတွေလည်းရှိပေါ့…။ တောင်သူလုပ်ငန်း တို့ ကုန်သည်ပွဲစား ဈေးသည်တို့…။ အဲဒိလိုပြောလိုက်လို့ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ဖို့ ငွေကုန်ကြေးကျ များလားဆိုတော့လည်း များပါဘူးပြောရမှာပဲ…။ ကျောင်းအုပ်ကြီး တိုက်ပုံ တစ်ဝတ်စာလောက် ကန့်တော့လိုက်ရင် ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်သွားတာ…။ မြို့နဲ့ ဝေးတာနီးတာတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆက်လုပ်ပေါ့…..။
နိုင်ငံခြားဆိုတာ…. တံခါးပိတ်ထားတဲ့ စနစ်ထဲမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာ…။ စကားတောင် မစပ်မိသေးပါဘူး…။ အဲ..အရေးအခင်းမှာ ပါတဲ့သူတွေ ရောက်ကုန်တာ ဘာညာ တော့ ရှိတာပေါ့…။ အလုပ်အကိုင်အတွက် သွားတဲ့သူဆိုလို့ မရှိသေးပါဘူး…။ တော်တော် အဆက်အသွယကောင်းတဲ့သူတွေမှ သင်္ဘောသားနဲ့ ထွက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တာပါ…။ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းဆိုတာကလည်း ခုလို အိမ်တိုင်း TV ရှိဖို့ မပြောနဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာတောင် တစ်ဆိုင်တစ်လုံးမတပ်နိုင်သေးဘူး…။ ကက်ဆက်လေးတစ်လုံးရှိနေရင် အဆင်ကိုပြေလို့….။ မိဘတွေကလည်း သူတို့မျက်စေ့ရှေ့မှာပဲ ထားချင်ကြတယ်…။ သားသမီးတွေက အလုပ်လုပ်ချင်လွန်းလို့သာ …။သူတို့ သဘောကတော့ ကျောင်းဖွင့်တဲ့ အချိန်ကျောင်းပြန်တက် ဘွဲ့ယူပြီးမှ အလုပ်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားဆိုတာတွေက ခပ်များများ….။ 1991 ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ အတော်များများက အလုပ်က ထွက်ပြီး ကျောင်းပြန်တက်ကုန်တာ…။
စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ လစာတွေက လည်း တိုးထားခါစ (အဲဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်) ၀န်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေ မျက်နှာပွင့်နေတဲ့ အချိန်ပဲ…။ နှစ်ပိုင်းလောက်ပါ…။ လ္ဘက်ရည် တစ်ခွက် တစ်ကျပ်ခွဲ လောက်ရှိတဲ့ အချိန်မှာ အောက်တန်းစာရေးလစာက 750 …။ ဆန်ဆယ်နှစ်ပြည် လည်း ကုန်သွယလယ်ယာဈေးနဲ့ရသေးတယ်..။ နေလို့ကောင်းသေးတယ်ဆိုရမှာပေါ့…။ အဲ နောက်ပိုင်းရောက်တော့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာ ကုန်ပစ္စည်းအမယ်တွေများလာ အားလုံးကို ၀ယ်မကိုင်နိုင် ….။ ဒီတော့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ…။
၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ခန့်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်ရမှ…။ ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်..။ ထောင်ဂဏန်းကစမတောင်းဘူး..။ လေးငါးသောင်းက စတောင်းတော့တာပဲ…။ ဒီတော့ အလုပ်ဝင်မဲ့သူက ဘာကိုပြန်တွက်လာလဲဆိုတော့ အခု ၀င်မဲ့ ကိုယ့်ကို ခန့်ပေးတဲ့ ဌာနက အောက်ဆိုဒ် ဘယ်လောက်ရမလဲ..။ သူအလုပ်ဝင်ဖို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်နှစ်လနဲ့ ကျေမလဲ …။ ဒါတွေ တွက်လာတော့တာပဲ..။ အဲဒိမှာအတောင်းအရမ်း ပွဲတော် စတော့တာပဲ…။ အောက်ခြေကနေ အထက်အဆင့် ဆင့် ဖြစ်တာလား …။ အထက်ကနေ အောက်ခြေကို ကူးစက်တာလားတော့ မသိဘူး …။။ 1990 နောက်ပိုင်း ခြစာမှုဟာ ခုထိမရပ်တန့်နိုင်သေးတာပဲကြည့်တော့…။
အဲဒိတော့ နေ၀န်းနီတို့ခေတ်ဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း လုံးပမ်းရင်းနဲ့ နောက်လာမဲ့ မျိုးဆက်အတွက် ဘာမှ ချန်မထားနိုင်သလိုဖြစ်သွားရတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး…။ စနစ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အကူးအပြောင်းမှာ ထားခဲ့နိုင်တာကတော့ နှုတ်ထွက်ရဲရဲ အတောင်းအရမ်းကဲ တဲ့ အစဉ်အလာ ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်…။ ဒီတော့ နေ၀န်းနီတို့ မျိုးဆက်က ညံ့ခဲ့တာလား ..။ နေ၀န်းနီတို့ဆီရောက်လာတဲ့ ခေတ်က လွဲနေတာလား …။ ဝေဖန်ပေးကြပါတော့…။
နေ၀န်းနီတို့ မျိုးဆက်က ညံ့တယ်ဆိုရင်တော့ နေ၀န်းနီတို့ ရှေ့က မျိုးဆက် အခု အသက် 55-60 လောက်ရှိတဲ့ သူတွေ နေရာမရှိ ဖြစ်ကုန်မှာစိုးရပါတယ်…။ မျိုးဆက်ဆိုတာက တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်မြင့်တက်လာမှသာ လူ့ဘောင် ဘ၀က မနိမ့်ကျမှာမဟုတ်လား..။ အဲဒိတော့ ကိုယ့်ရှေ့ ရောက်နေတဲ့ ခေတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ခေတ် လွဲမှားမနေဖို့ ကိုယ့်နောက် ကိုယ်နေရာဝင်ယူလာမဲ့ မျိုးဆက်သစ် တွေ ဘာတွေ ချန်ထားရစ်ခဲ့မလဲ ဆိုတာ…….. ခုအချိန်မှာ ဘာတွေ ပြင်ဆင် / လုပ်ကိုင်ကြမလဲ ပြောကြည့်ကြရအောင်……….။
လူတွေကိုက လွဲနေတာပဲ ဖြစ်မယ် ဦးနီရေ
အဲဒီလွဲတာကြီးကို ဘယ်လိုပြင်ရင်ရမလဲ ကိုပေါက်ဖော်ရေ
ငတ်ရင်တော့ တောင်းကြမှာပဲ လုကြမှပဲ
ရှေးလူကြီးတွေ ကတော့ သူတို့ ဆုံးရင် ကျန်မိသားစု ဟန်မပျက်နေနိုင်အောင် ရှာဖွေပေးခဲ့တယ် ။ တစ်ချို့ ဆို ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက် စားမကုန် ဆိုကလား ။ ကျုပ် မျိုးဆက်အတွက် ၊ ရှေးလူကြီးတွေ လိုမျိုး မချန်ရစ်နိုင်မှာဘဲ စိုးတယ် ။
ရဲရဲရင်ဆိုင် ရှင်သန် နေထိုင်သွားတာ
နောက်မျိုးဆက်တွေ အတွက် လွယ်လွယ်အရှုံးမပေးတတ်တဲ.
ရဲရဲနီနေတဲ့ အရှေ့ဘက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကထွက်ပေါ်လာကာစ နေ၀န်းနီရေ
(နေ၀န်းနီတို့ မျိုးဆက်က ညံ့တယ်ဆိုရင်တော့ နေ၀န်းနီတို့ ရှေ့က မျိုးဆက် အခု အသက် 55-60 လောက်ရှိတဲ့ သူတွေ နေရာမရှိ ဖြစ်ကုန်မှာစိုးရပါတယ်။)
၅၅.၆၅ မျိုးဆက်ကြီးကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နေရာရှိပါတယ်။ တရားစခန်းမှာပါ။ ချွေးမတွေရဲ့  မီးဖိုချောင်မှာပါ။
တီချာ့လို ဆိုရင်တော့ စာအုပ်ပုံထဲမှာပါ။ မျိုးဆက်သစ် တို့ တိုးတက်ရစ်ဖို့ ( ဆရာသင်းစကား
ခေတ္တငှား) စကားလုံးအပြည့်နဲ့ ကောင်းကင်ကြီးချန်ထားခဲ့ပါမယ်။:grin:
ခေတ်က ဆိုးသလား မဆိုးသလား မဆုံးတဲ့ သီချင်းမှာ အဲဒိခေတ်ကို ဖွင့်ချပါ့မယ်..။ ဟီး ပြောကြော်ငြာဝင်တာ…။ ဆက်လက်ရှုစားကြပါ…။ ဘယ်သူ့မှတော့ ညှာမှာမပါဘူးနော်…။
တိတိကျကျဆိုရင်.. ကမ္ဘာစစ်ပြီးခေတ် လူတွေ စစ်ထဲသေကုန်တာမို့.. သဘာဝတရားကပြန်ညှိပေးတဲ့အနေနဲ့.. ပို့စ်ဝါးမှာ ကလေးတွေ ဘုမ်း..ဘုမ်းဆိုပြီးထွက်လာတယ်..။
Post-World War II baby boom and who grew up during the period between 1946 and 1964.
အဲဒီအသက်တန်းက.. အခု.. အုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းရဲ့ ထိပ်တွေမှာရှိကြတယ်..။
တိုင်းပြည်တပြည်. ဆိုးတာ..ညံ့တာ.. လူမှုေ၇း..ဘာသာရေး အကုန်.. အဲဒီအသက်တန်းမှာ.. တာဝန်အဓိကရှိတာပေါ့..။
တကယ်တော့.. မှားမှန်းသိရင်.. ပြင်ရမှာပေါ့..
မြန်မာပြည်က .. တောက်လျှောက်ကျတာ.. အခုဆို… ကမ္ဘာ့အညံ့ဆုံး.. ၁၀ထဲဝင်နေတာတွေ..တော်တော်များနေတယ်..။
နည်းနည်းပြင်လို့ကို မရဘူး.. တော်လှန်ရေးလို.. ၀ုန်းဒိုင်းနဲ့အရင်အတွေးအခေါ်တွေ.. ပြောင်းပြန်လှန်ရမှာ…
သူများတွေ ပြင်ခိုင်းနေဖို့မလိုပါဘူး..။ ဘေဘီဘုံမာတွေ… ကိုယ်တိုင်က ပြင်ရမှာ…။ ;)
အဲဒီခေတ်ဟောင်းကရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း.. ဖတ်ကြဖို့မသင့်ပါဘူး..။
ကမ္ဘာမှာ နေ့တိုင်းစာအုပ်သစ်တွေထွက်နေတယ်..။ အဲဒီစာအုပ်တွေ.. ဘာသာပြန်ဖတ်. .လေ့လာ..ဆွေးနွေးကြဖို့..အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်..။
.. ရှေးဘာသာပြန်..ဆိုရှယ်လစ်..ကွန်မြူနစ်.. ဒီမိုကရေစီ.. ဗုဒ္ဓဘာသာ..။ ခရစ်ယန်..အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေက အစ.. ချောင်ပိတ်..လိုရာဆွဲ.. ကိုယ်ကြိုက်တာ.. ယူပြန်ထားတာတွေ.. အင်မတန်လွှမ်းမိုးတယ်.. တွေ့ရလိမ့်မယ်..။
ကိုယ့်အတွေးအခေါ်ကို.. အမြဲပြောင်းပြန်တွေးယုံပါပဲ..။ ဒီလိုတွေးတယ်ဆို.. ဟိုလိုပြောင်းတွေးယုံပါပဲ..။
ပုံမှန်… တွေးလိုက်တဲ့ အတွေးအခေါ်..ဆုံးဖြတ်ချက်က.. မှားနေဖို့.. ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထက်(အထက်)မှာ. ရှိနေပါတယ်…..။
အဲဒီအလေ့အကျင့်ကို.. ထပ်ခါလုပ်ရင်.. .. အောက်ဆုံး(၁၀)ကနေ.. ရှေ့ဆုံး(၁၀) ရောက်လာမှာပဲ..။
အခု ၄၅နဲ့အထက် မြန်မာတွေအားလုံး.. ဒီလိုလုပ်သင့်တယ်..။ အငယ်တွေ သူ့အလိုလို ညှိကူးယူသွားလိမ့်မယ်..။
အစကတော့ စာဖတ်ပြီး ပြန်ထွက်သွားမလို့ပဲ။
ဒါပေမယ့် အနီတွေ အရမ်းများနေတာ သတိထားမိတော့ ဘာ့ကြောင့်ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ရေးသူရော၊ မန့်သူတွေရော အစွန်းမထွက်တာမို့ အနီကို ထူးထူးခြားခြားပေးနေတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်ပါလိမ့်???????
ကျနော်သိသလို ပြောရရင်တော့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များနဲ့မဟာသူရဲကောင်းတပ်မတော် က ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် တရုတ်ကြီးကို အကြွေးတွေဆပ်ဖို့ ကျန်ခဲ့မယ်ထင်မိပါကြောင်း
အင်း အခုကိုပဲ တိုင်းပြည်မှာ
နိုင်ငံတကာမှာ အကြွေး ဘယ်လောက်တင်နေတယ် ။
တရုတ်ကြီးဆီမှာ အကြွေး ဘယ်လောက်တင်နေတယ် ။
အရမ်း သိချင်တာပဲ ။
အဲဒါသိမှပဲ ချင့်ချိန်လို့ ရမှာပေါ့။
နို့မို့ အဘတို့ ဝေဖန်တာတွေက သောက်တလွဲ ဖြစ်နေမှာပဲ ။
တရုတ်ကြီးဆီမှာ အကြွေး တစ် ထရီလီယံ ရှိတယ်ဆိုပါဆို့ ။
ဒါတွေကို ကိုယ်တွေက Amount မသိပဲ ပြန်မဆပ်နိုင်ဘူး ပြောကြည့် ပါလား ။
တရုတ်ကြီး က ဗမာပြည်ကို တခုခု အကြောင်းပြပြီး ကောက်သိမ်း လိုက်မှာပေါ့ ။
တရုတ်ကြီး တကယ်လုပ်ရင် US လဲဝင်မပါရဲပါဘူး ။
US လဲ ဘေးနားက အော်နေယုံပဲ ရှိတာပါ ။
အဓိကက Information အမှန်ရဘို့ အရေးကြီးတယ် ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ မညှာဘူးနော် ဆိုလို့
ကျွန်တော့် အတွက် အခုတည်းက တစ်နေရာစာ ချန်ထားပေးပါ လို့
ဒီလောက် ကွန်ပလိန်းများတဲ့ ကိုနေ့ကို လွှတ်တော်ထဲ ပို့လိုက်ပါဗျာ၊ တခါထဲ ပါးစပ်ပိတ်သွားအောင်လို့။ :D
ကျွန်တော် ကတော့ အမြဲပြောနေကြပေါ့နော်
ကျွန်တော် တို့ မျိုးဆက် ညံ့ခဲ့တယ် ဆိုတာ
( ၄၀-၅၀ / ၈၈ မှာ အသက် ၂၀ ပါတ်ချာ မျိုးဆက်ပေါ့ )
ကျွန်တော် တို့ အရမ်း မညံ့ခဲ့ပါဘူး ။
ကျွန်တော် တို့ မျိုးဆက် ဟာ
၈၈ မှာ ကျောင်းသား အနေနှင့် ရှေ့ဆုံးကပါခဲ့ကြတယ် ။
လက်နက် နှင့် အလေ့အကျင့် မရှိတော့ ဆုံးခန်း မတိုင်နိုင်ခဲ့ဘူး ။
ဘာပဲပြောပြော နေဝင်း ပြုတ်သွားတယ် ။
အခုထိလည်း ဇွဲမရှော့ပဲ ဆက်တိုက်နေတုန်းပဲလေ ။
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ကိုဇာဂနာတို့က ကျွန်တော် တို့ မျိုးဆက်ပဲဟာ ။
အဲဒီတော့ ငုတ်တုတ်ခံခဲ့တဲ့ ရှေ့မျိုးဆက် တွေထက်စာရင်
ကျွန်တော် တို့ မျိုးဆက်ဟာ တခုခုလုပ်ခဲ့ ပါတယ် ။
လုပ်လဲ လုပ်နေဆဲပါ ။
၄၅-၅၀တန်းမျိုးဆက်..နဲ့ပါတ်သက်ပြီး Foreign Resident ပြောတာအပြည့်အ၀ထောက်ခံပါကြောင်း..
ရွာထဲမှာ အဘတွေတယ်ပေါသကိုး။ ဒါကြောင့်ဂေဇက်ကဟေ့ဆို တုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ရဲဘူးဆိုလား။
“လွဲလွဲလေးလည်း ကောင်းပါတယ်၊ စိတ်ကျေနပ်ရင်ပြီးတာပဲ” ….
ထူးအိမ်သင် သီချင်းလေး ငြီးလိုက်ရမှာ….
အသက်၅၀ ကိုကျော်လာခဲ့တဲ့ ကိုပေါက်တို့ မျုိးဆက်ကတော့ သားသားကြောက်ကြောက်ဆိုပြီး
နေခဲ့ကြသလို မှားနေတာကိုတောင် မှားမှန်းမသိဘဲရေစုန်မျောခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရင်လဲရပါတယ်။